Kiisaska Adeegga - Anshun AKF Medical Technology Co., Ltd.
Intii lagu gudajiray muddadii faafida, waxaan si dhakhso ah u dhignay warshado iyo khadadka wax soo saarka ee waji duubista.
Dhammaan asxaabtii shirkaddu waxay si wada jir ah u wada shaqeeyeen si loo sameeyo dadaalka ugu wanaagsan ee lagu caawinayo bulshada oo dhan.
Intii lagu gudajiray muddadii faafida, waji daboolan ee laga soo saaray khadka wax soo saarka AKF ayaa la kulmay dalabyo badan oo gudaha ah maalin kasta.
Waqtigan xaadirka ah wax soo saarka AKF ayaa loo iibgeeyay dibada iyadoo la iibsanayo shirkado kala duwan iyo qaababka daryeelka ee Shiinaha Intaa waxaa dheer, waxaan sidoo kale gacan weyn ka geysanay dagaalka caalamiga ah ee ka dhanka ah cudurka faafa.
Shen zhen Xin zhong Property Co., Ltd. waa hoosaad ka tirsan Bangiga Shiinaha ee Degmada Futian, Magaalada Shen Zhen. Shirkadani waxay iibsatay AKF
hal waji ilaalin oo la tuuri karo .............
Intii lagu gudajiray mudadii kacsanayd ee faafa, shaqaalihii hay'ada magaalooyinka ayaan guryahooda si nabad ah ujoogin. Waxay ku dagaallameen safka hore si ay u dhammeeyaan go'doominta shaqada cudurka faafa. Waxay ka soo iibsadeen AKF tiro badan oo waashooyin caafimaad oo la tuuri karo ah.
Warshada Ding Tai Fu ee Degmada Ping Shan:
Intii lagu gudajiray muddadii kacsanayd ee cudurku faafayay, shaqaalaha warshada dadaalka badan ayaa wali ka shaqaynayay safka hore ee aqoon isweydaarsiga. Maaskarada 'AKF' waxay bixiyaan gacan-ka-hortagga cudurrada gacanta koowaad ee wax soo saarka!
Shaqaalaha Safka hore ee Caafimaadka Inta lagu gudajiro xiisadda faafida, shaqaalaha caafimaadka waxay ubaahanyihiin ilaalinta ugufiican.
Maaskarada 'AKF' waxay wajiga koowaad ka ilaalisaa shaqaalaha caafimaadka ..................